Kodzero dzeVabereki. | KUSVIRA
Sevabereki Isu Tinodawo Kune Vana Vedu:
-> Kuti Gender pfungwa dzinobviswa kubva muzvirongwa muzvikoro.
-> Izvo zvirongwa zvokudheerera zvinogadzirisa mhando dzese dzekushungurudza dzinoitwa muzvikoro.
-> Kuti vadzidzisi vane nhungamiro dzakasimba pane izvo zvinodzidziswa munharaunda yebonde.
-> Izvo zvepabonde ed zvirongwa zvinodzokera kune zvidzidzo zvebonde Biology.
-> Izvo zvinopfuura mifananidzo yemhombwe inobviswa kubva kune ese epabonde-ed mapurogiramu.
-> Izvo zvepabonde ed zvirongwa ane makore akakodzera.
-> Kuti vana havakanganiswe nekurayirwa kuchengeta zvakavanzika zvekirasi.
-> Izvo vabereki vane zvisina kubvumidzwa kuwana kune zvemukati chero ezvebonde-ed zvirongwa zvepurogiramu.
-> Kuti vana havapihwe mukana wekuwana mawebhusaiti ane hukama hwepabonde uye zvepabonde.
-> Kuti vabereki vanochengetera kodzero yekuona tsika dzemwana wavo.
-> Kuti vechidiki, nerutsigiro rwemhuri, vanobvumidzwa kugadzirisa chero nyaya dzevakadzi nenzira yemasikirwo.
-> Kuti vabereki vanochengetera kodzero yekuona kutungamira kwemwana wavo muhupenyu.